Valan-javaboary Sinharaja (Ala Ala) ~ Journey-Assist - Ny ala orana. mampidi-doza.
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Sri Lanka » Fampahavian'i Sri Lanka » Valan-javaboary Sinharaja (Ala Ala)
All about Sri Lanka. Kitiho eto!
7 martsa, 2020
Ala Ala Sinharaja
Mampiavaka ny kianja. Inona no mahaliana ao amin'ilay zaridainam-panjakana?
Hatramin'ny ora fiasana
Ny vidin'ny fitsidihana ny valan-javaboary. vidin'ny
Ahoana ny fomba hankanesany any amin'ny kianja Sinharaja
Loza ao Sinharaja Park
Reviews for Yala Park
Toetoetran'ny Valan-javaboary Sinharaja (sary fijery + sary)
Sinharaja dia iray amin'ny valan-javaboarim-pirenena ao Sri Lanka, izay any amin'ny faritra atsimo amin'ity firenena ity. Tsy dia malaza amin'ny mpizahatany mihoatra noho ny an'ny hafa. National Park - Yalafa miavaka kokoa sy mahaliana kokoa. Avy amin'ny fiteny sinhala ny anarana "Sinharaja" dia adika amin'ny hoe "The Lion King."
Any amin'ny faritra, ity kianja ity dia kely noho ny valan-javaboary hafa any Sri Lanka. Miasa 88,64 metatra toradroa izany. km. Na izany aza, ny toetra tsy manam-paharoa no voatahiry amin'ity faritany ity, satria ny zaridainam-pirenena dia rakotra ala ala mando. Betsaka ny biby tsy dia fahita no mipetraka eto ary misy zavamaniry voatanisa ao amin'ny Red Book.
Biby mientana ao amin'ny zaridainan'i Sinharaja
Mandeha biby any an'ala ala.
Bibikely ao amin'ny Ala Sinharaja
Biby ao Sinharaja Park
Inona no tokony hatao ary inona no andrasana amin'ny Sinharaja Park
Ny fitsangatsanganana tsotra indrindra amin'i Sinharaju dia manana endrika fitsangatsanganana amin'ny iray amin'ireo fidirana mankany amin'ity zaridaina ity, dia an-tongotra manaraka ny adiny 3 mandeha mivantana any anaty ala miaraka amin'ny fitarihana sy fiverenana. Tsara homarihina fa tsy mandritra ny fitsangatsanganana eny amin'ny zaridaina fa tena mahaliana ny masonao.
Manome tari-dalana ao amin'ny alan'i Sinharaja
Miankina amin'ny mpitari-dalana ny ampahany betsaka. Matetika izy ireo no adalana noho ny hakamoana sy ny tsy finiavana hiaraka amin'ireo mpizahatany amin'ny lalana sarotra tanterahina. Na izany aza dia afaka maharitra ianao amin'ny fitakiana hitarika anao amin'ny lalana manokana.
Ora amin'ny fanokafana Sinharaja Park
Sinharaja Park dia misokatra amin'ny ora.
Soso-kevitra alohan'ny hitsidihan-tena ao amin'ny alaala an'ny Sinharaja
Sinharaja dia miaina mihoatra ny 88 metatra toradroa. km, ka tsy hiasa intsony ny làlana manodidina azy.
Azonao atao ny mandinika ny zaridainam-pirenena amin'ny iray amin'ireo lalan'ny fizahan-tany maharitra manomboka eo akaikin'ny afovoan'ny eco, izay misy maromaro.
Sarintany Lalana Sinharaj
Ny fandehanana an-dàlana izay napetraka ao anaty ala dia maimaim-poana, na izany aza, dia aloa ihany ny fidirana amin'ny lalana rehetra mamakivaky ny eko-centre.
Afaka mandehandeha eny amin'ny lalanao tsy mandeha ianao, fa mila mitandrina be ianao avy eo.
Tena mampidi-doza eto, indrindra indrindra dia hita ny bibilava.
Tena tsy voalaza ny mandeha eny anaty ala any irery.
Afaka manofa fiara ihany koa ianao miaraka amin'ny mpitari-dalana ho an-tongotra manodidina an'i Sinharaja na mividy fitsidihana. Amin'ity tranga ity, tsy misy antony manahy momba ny làlana: hatolotra ny fidirana ianao, hanome anao izy ireo hiditra ny faritany ao ary avy eo hitarika anao amin'ny lalan'ny ala izy ireo.
Ny vidin'ny fitsidihana ny Park Sinharaja
Ny fidirana ao Sinharaja dia mendrika 644 Rupees Sri Lankan ho an'ny olon-dehibe
Vidiny ho an'ny ankizy - 325 ropia
Ny sarany dia asaina any amin'ny Checkpoints hita any amin'ny ivon-toeram-barotra.
Malalaka ny fidirana amin'ny Sinharaja Park
Raha ny fizahan-tena mahaleo tena any anaty ala dia azo atao ny misoroka ireo paositry ireo ary manakana ny saram-pidirana.
Ivom-pidirana ao Sinharaj
Ho an'ny fitsangatsanganana mahaleo tena mankany Sinharaja, azonao atao ny mampiasa ny iray amin'ireo fidirana, na izany aza, tsy ny tsirairay amin'izy ireo no mamela anao hidirana mivantana ao anaty ala mampiasa ny fitateranao manokana.
Ny môtô no afaka mitondra fiara avy eo anilan'ny Neluv (anaran'ilay lalana mitondra mankany amin'ny riandrano Duli Ella).
Rehefa niditra tao Sinharaja tamin'ity lalana ity ianao dia afaka mahita ny riandrano etsy ambony ary avy eo dia mandroso lavitra amin'ny làlan'ny lalana mankany amin'ny eko-afovoan'i Podadeniya sy Lankagama, mijanona an-dalambe any anaty ala. Amin'ny toerana sasany, ny toe-dàlana misy ny fahaketrahana, ka tsy maintsy mandroso tsikelikely ianao. Tsara kokoa ny miverina amin'ny lalana mitovy.
Avy amin'ny tanànan'i Pellegama
Avy amin'ny ilan'ny vohitra Pallegam, afaka manatona ny Eco-Center of Nutrition, mandalo an'i Duli Ella. Misy lalan-drano maromaro sy lalan-dàlana tsara. Eto ianao dia afaka manakarama torolàlana.
Hatramin'ny ala Sinharaja avy amin'ny tanànan'i Deniya
Mbola afaka mankany Sinharaja avy hatrany amin'ny tanànan'i Deniya ianao (mankany amin'ny fidirana amin'ny Site Site). Any Deniye dia misy ny miala amin'ny fitateranao manokana ary avy eo mandehana any anaty ala (azonao atao ny mitondra torolàlana). Tsy azo atao ny fidirana amin'ny môtô anaty halalin'ny ala, satria tery ny lalana eto.
Avy any Kudava (avaratra)
Avy amin'ny lafiny avaratra amin'ny zandarimariam-pirenena dia afaka miditra ao amin'ny tanànan'i Kudava ianao.
Lasy misy ny tobin'ny toby
Manakaiky ny fidirana rehetra dia afaka mijanona ao amin'ny toby manokana ianao mandany ny alina ary manomboka mandehandeha kely maraina.
Torohevitra momba ny fitsidihana ny alaala any Sinharaja
Fotoana mety hitsidihana eto dia vanin-taona mafana, manomboka eto amin'ny Novambra ary mifarana amin'ny volana martsa.
Loza ao anaty ala orana
Betsaka ny tsoka amin'ny Sinharaja. Tsy mitovy amin'ireo izay monina any amin'ny toerana fitobian'ny eropeana izy ireo, kely kokoa. Matetika no tsy mahatsapa ny miondriny. Indraindray ireo leeces dia mihatra amin'ny olona mivantana avy amin'ny hazo.
Havitrika eny amin'ny alan'i Sinharaja
Ny akanjo matevina dia hiaro azy ireo. Rehefa tafaverina avy any anaty ala ianao dia tokony mandinika tsara ny vatanao, satria miakatra any amin'ny toerana tsy ampoizina indraindray.
Ary koa, aza mitady fivoriana amin'ny elefanta - mampidi-doza be loatra izany.
Address: Sinharaja Rainforest, Deniyaya 81500, Sri Lanka
telefaonina: + 94 71 732 7651
Of. Tranokala Sinharaja Park: https://www.sinharajaforestreserve.com/
Ampisehoy ny sari-tanety ho an'ny fanamoriana: https://g.page/sinharaja-forest-reserve-855?share
Sinharaja park (ala maina) ao amin'ny sarintany
Hevitra momba ny Valan-javaboary Sinharaja
Salanisan'ny salanisa 4.9 / 5. Isan'ny isa: 12